Balantii Jaceylka Ee Todobadii Fiidnimo Iyo Filashadii Wacneyd. – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Balantii Jaceylka Ee Todobadii Fiidnimo Iyo Filashadii Wacneyd.
August 4, 2013 August 4, 2013 6
Ballantoodu waxa ay ahayd toddobada fiidnimo, nuse saaca dhan ayuu se soo hordhacay. Shaaca oo aan madoobaan buu soo fadhiistay derbigii qabyada ahaa oo ku sugay. Magaalada intaa la’eg halkan ayay ka doorteen in ay ku kulmaan.
Waa meel yara cidlo ah oo aan dhismayaal badani u dhowayn cagta dadka iyo ilayskana ka leexsan. Guuxa iyo sawaxanka magaalada kolka uu sidan uga soo baxsan yahay maqalkiisa waxa ay ku soo gaadhayaan sidii adduunyo kale.
Cirka xaadhan xiddiguhu aad ayay u muuqdaan. Neecaw uu u baahan yahay baa dhacaysa. Dareenno laxaad leh oo isugu jira farxad, filasho, hilow iyo kelinnimo ayaa beerqaadaya. Fadhiga wuu qaban la yahay oo wuu kacaa-fadhiisanayaa.
In kasta oo aan goortii ballanta weli la gaadhin wuu raagsaday oo sugi kari la yahay. Marba malluug ismoodsiis ah baa hortiisa ka soo baxaysa oo uu eegmada ku la hungoobayaa. Billay meesha soo garan waydaa? ayuu ku fekerayaa. Oo maxay u soo garan wayday sow tii aragtay, ayuu isu celinayaa. Malaha waa ay soo lugbixi wayday? ayuu haddana iswayddiinayaa. Wax kastaa waa ay dhici karaan, ayuu saadaal xun isku dhahayaa. Xiisaha iyo filashada weyn ee ay u lee dahay darteed ku ma kalsoona waqtiga, ku ma kalsoona meesha, oo xitaa iyada iyo ballanteedii adkayd ku ma kalsoona.
Wuu kacayaa oo isaga dhankii uu ka sugayay indhaha ku haya dhawr tallaabo xaggaa u qaadayaa, oo haddana bartii uu fadhiyay ku soo noqonayaa. Kolba caleen ama warqad dabayshu dhirbaaxday jaqafteeda ayuu jaanteedii moodayaa oo dhegaha iyo dhaayaha ku la boodayaa. Haddana kolka uu saacadda eego ayuu ogaanayaa in weli waqti dhiman yahay.
Dorraad oo isugu dambaysay ayuu xusuusanayaa, iyo sidii ay u ekayd, iyo dharkii ay gashanayd, iyo sidii ay u dhunkanaysay, iyo erayadii ay ku lahayd, iyo sidii ay ugu dhaaratay wax walba oo dhaca caawa in ay halkan ugu imanayso, iyo sidii markii ay ka la tegayeen u ahaayeen sidii jidh keliya oo la ka la jeexayo. Alla kalataggaasi xanuun badnaayee, ayuu xusuusanayaa.
Imika goortii ballantii waa la joogaa, laakiin iyadii ma joogto. Miyay baaqatay mise waa ay soo socotaa? Bal haddii ay soo lugbixi waydo ka warran, ama sabab kale u baaqato? Maya, qofku wuu soo raagi karaa waayo mishiin ma aha. Maxaad xumaanta u saadinaysaa sow dadku ma soo daaho? Haa, wanaag ku feker, in ay soo socoto.
Haddii ay timaaddo waa khayr, bal se ka warran haddii ay iman waydo? Haa, haddii aad cidladaa ku hungowdo oo quus la carrawdo bal ka warran? Alla labada xaaladood ka la duwanaa, ka la qurux badanaa oo ka la foolxumaa! Haddii ay baaqato caawa waxa aad qadoodi kaga seexanaysaa jidhkeedii naxariista badnaa ee aad isku duubi lahayd, iyo dhunkashadeedii jannada ahayd, iyo cadarkeedii udgoonaa ee aad moodi jirtay in keligeed loo sameeyay, iyo codkeedii ashqaraarka lahaa, iyo taataabashadeedii liibaantu ku dhammayd, iyo idilkeed. Waxaas oo dhan baad ka qadaysaa.
Goortii ballanta toban daqiiqadood baa la dhaafay. Welwelkii baa kaga sii daray. Iyada iman wayday iyo isaga oo quus la hoyday ayaa la tusay. Toban daqiiqadood wax badan ma aha oo waa ay soo socotaa ee ha iswaalin, ayuu isku waaninayaa. Maxaad balaayada u saadinaysaa adiga oo wanaag saadin kara? Waa ay soo socotaaye niyadxumada iska saar oo samaan rajee, ayuu isku calool adaygsinayaa.
Imika waa toddobadii iyo badhkii oo nuse saace dhan baa ballantii la dhaafay, rajaxumada iyo welwelkuna waa ay ku sii xoogaysteen. Awal isaga ayaa degdegsanaa imika se run baa u awood sheegatay. Gubashada naftiisu waxa ay gaadhay meel fog oo murugo ah. Waa muraaradillaac oo ciil buu la wareersan yahay. Daqiiqaddan uu isagu halkan ku cadaaban yahay iyadu waxa ay samaynayso iyo waxa ay k fekerayso ayuu maleeyay. Tolow dhab ma u ogaan kartaa dareenkaaga iyo qiimiga ay kuu lee dahay? Abadan! Ma jiro qof bani aadan ah oo dareenkaagan garan kara ama xitaa qiyaasi karaa.
Maya, maangal ma aha in ay iska maqnaato. Suurtagal ma aha. Maxay u ahaan wayday sow wax waliba ma qabsan karaan. Wuxu waa adduun oo hawl laga ma waayo.
Afartan daqiiqadood baa ballantii la dhaafay, welina naftiisu waa ay u qaadan la dahay in ay baaqatay. Ma oggola in uu quusto oo iska tago. In waagu halkan ugu beryo ayuu diyaar u yahay si uu u hubiyo dhab ahaan in ay baaqatay si aanu u lumin fursad uu caawa ku la kulmi karo.
Qaadanwaa baa ku dhacay kolkii uu ku war helay iyada oo la taagan oo la hadlaysa. Farxaddii waxaay ku noqotay naxdin. Wuu rumaysan waayay in ay timid. Inta uu ku booday ayuu isku duubay oo isku wada duubay oo kor u la booday oo sidii karreeb dhashii helay meel walba ka dhunkaday. Udugga cadarkeeda, uumiga jidhkeeda, garaaca wadnaheeda, neefneefsigeeda, iyo xubnaheeda naxarista la wada godlan ayuu ka guddooday oo ku gadooday. Dabadeed waxa uu noqday sidii wax miyirla. Waxa uu noqday sidii dunidan laga dheelmiyay oo jannadii dalxiis lagu geeyay. Ciilkii iyo murugadii ka buuxay waxaa ku milmay farxad iyo liibaan, dabadeed waxaa ka dhex abuurmay dareen kale oo culus oo aan la qeexi karin.
Waa ay hadlaysay oo waxa ay ka hadlaysay walaalkeed oo gabadh doonay, eeddadeed oo dhul kale ka timid iyo siliskeedii oo ka go’ay, waxa ay se ahaayeen dhawaaqyo sida laydha dhegihiisa maraya oo dhaafaya. Danayn maayo erayada in uu garto ama ka falceliyo, waa se codad maqalkiisa ugu dhacaya sida muusigga. Dhaqdhaqaaqa dibnaheeda ayaa isaga hadalkeeda uga dan ah.
Waxa uu dirqi ku maqlayaa guuxa iyo sawaxanka magaalada, laakiin dunida oo dhami waa halkan, goortan iyo labadooda. Joogisteeda iyo jiritaankeeda ayaa naftiisa iyo garashadiisa oo dhan buuxiyay. Nolosha oo dhami waxa ay ugu ka la qaybsantay intan muhiimka ah ee uu haysto iyo inta kale oo aan macnaha lahayn; lammaanidooda iyo wadarta kale oo dhan; labadooda oo mid isku ah iyo inta kale oo wax kale isku ah. Wax kasta oo aan iyada ahayni waa ay ka baxeen xusuustiisa iyo dareenkiisa, mana jiraan wax ka dhiman oo uu tebayaa.
Wejiga ayuu laabteeda ku aasay dabadeed cod khushuuc leh oo la moodo in uu ku cibaadaysanayo ku yidhi: ”Wax aad ii tahay jiritaanka oo dhan.” Dabadeed muddo dheer ayay aamuseen iyaga oo sarejoog isugu duuban.
Weligaa Sadax Xaaladood Intaad Ku Sugantahay Ha Sameyn Sadax Xaaladood Oo Kale Sida Tanoo Kale.
KaLaFoGe August 8, 2014 August 7, 2014
Jaceylka iyo Xidhiidhka lamaanuhu Yeeshaan Ayaa soo saara sir badan iyo Waxyaabo badan oo qofku Qarsan Jirey
KaLaFoGe January 15, 2014
Qeybtii 2aad: Waa Qisadii Iila Yaabka Badneyd ee Nolosheyda i soo Marta..
KaLaFoGe April 5, 2013